သမိုင်းမှာလဲ နမူနာတွေ ရှိခဲ့ဘူးတယ်။ ရိုမန်-အင်ပါယာ Caligula ကနေ Julia Livilla, Drusilia, Agrippina the Younger ဆိုတဲ့ နှမ-တူမ သုံးယောက်လုံးကို ယူခဲ့တယ်။ အင်္ဂလန်က Queen Victoria နဲ့ Prince Albert တို့လဲ တဝမ်းကွဲတွေ။ ဥရောပ ဘုရင်တွေရော မြန်မာဘုရင်တွေပါ သွေးသား တော်စပ်သူတွေကို မိဘုရား မြှောက်တာ နန်းတွင်း အစဉ်အလာ Intermarriage ရှိခဲ့ကြတယ်။ နာမယ် အကြီးဆုံး ဆိုရမှာက House of Habsburg ဖြစ်တယ်။ ရာစု ၆ စုတိုင် အမျိုးချင်း လက်ထပ်တာကြောင့် “မေးရိုးက ရှေ့ငေါထွက်နေတာ” ကို Austrian lip လို့ ခေါ်တယ်။ စပိန်ဘုရင် Charles II ဟာ အစားတောင် သူများလို ဝါးမရတော့ဘူး။ မျိုးဗီဇ ဝေးတာကို Exogamy ခေါ်တယ်။ Gene (ကော်ပီ) ဖြစ်ဘို့ အခွင့်အလမ်း နည်းလို့ ပေါင်းသင်း ထိုက်တယ်။ Iceland က deCODE genetics company ကနေ ၃ ဝမ်းကွဲတော်သူတွေဟာ မျိုးစပ်လို့ အောင်မြင်မှု အများဆုံးလို့ ထုတ်ပြန်တယ်။ အိုက်စလန် ဆိုတာ သေးငယ်လွန်းလို့ အမျိုးနီးစပ် လက်ထပ်ကြတာ များတာကိုး။ Genetic sexual attraction (GSA) ဆိုတာလဲ ရှိသေးတယ်။ အမျိုးတော်ပေမဲ့ ကြီးမှ ပြန်တွေ့တဲ့အခါ Sexual attraction ဖြစ်ပေါ်မှုကို ပြောတာပါ။ ဆွဲဆောင်မှု သာမက Trustworthy ယုံကြည်မှုလဲ ရှိကြတယ်လို့ မှန်းရတယ်။ “အိုးချင်းထား အိုးချင်းထိ၊ ကြိုးချင်းထား ကြိုချင်းငြိ” ဆိုတာနဲ့ မတူဘူး။ Incest ဟာ “တရား မဝင်ဘူး၊ ဘာသာရေးက ခွင့်မပြုဘူး၊ မလိုလားအပ်တဲ့ Taboo ဖြစ်တယ်၊” လို့ နားလည် လက်ခံကြတယ်။ လူမှုရေး အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ဘာသာရေးအယူတွေမှာ ကွဲပြားမှုတော့ ရှိတယ်။ ရှိသမျှ ဘာသာ ပေါင်းစုံက တားမြစ်မှု အမျိုးမျိုး လုပ်ထားပေမဲ့ တခုနဲ့တခု မတူဘူး။ Roman Catholic Church က အတင်းကြပ်ဆုံးဘဲ။ Eastern Orthodox Church က ၂ ဝမ်းကွဲအထိ ခွင့်မပြုဘူး။ Anglican Communion က ၁ ဝမ်းကွဲကို လက်ထပ်ခွင့် ပြုတယ်။ Islamic ကတော့ ဖအေရဲ့မိန်းမ (မိခင်နဲ့ မိထွေး)၊ နှစ်ဘက်က အဒေါ်၊ နှမအရင်း၊ ဖအေတူ-မအေတူ နှမ၊ တူမ၊ သမီး၊ (မအေကို ယူပြီးရင်) မယားပါ-သမီး၊ ချွေးမတွေကို ယူခွင့်မပြုဘူး။ လက်တွေ့ဘဝမှာ ၂ဝဝ၇ နိုဝင်္ဘာ ၂ဝ ဘီဘီစီ သတင်း တပုဒ်မှာ အိန္ဒိယ၊ အနောက် ဘင်္ဂလားမယ် သမီးအကြီးကို ယူတာဟာ Divine sanction အလာရှင် အလိုတော်ရလို့ Afazuddin Ali ကနေ သူ့မိန်းမကို ပြောတယ်။ မိန်းမကလဲ တရာရုံးမှာ အဲလိုပြောတာ လက်ခံတယ်လို့ ထွက်ဆိုတယ်။ ရွာသားတွေကတော့ ဒေါသထွက်ပြီး ခေါင်းဖြတ်ချင်ကြတယ်။ တရားရုံးကလဲ သူ့အာဏာစက် မဟုတ်လို့ အဆုံးအဖြတ် မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ မိသားစုဟာ တခြားနေရာ ရွေ့ပြီး ကနေ့ထက်ထိ နေထိုင် ပေါင်းသင်း နေကြဆဲဘဲ။ Hindu ဟိန္ဒူတွေက ဒါကို ပြင်းပြင်းထံထံ ဆန့်ကျင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တောင်ပိုင်း (ဒရာဗီဒီယန်) တွေကတော့ တူမကို ယူတာ လက်ခံတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ ၅ ပါးသီလ နဲ့ မဂ္ဂင်-ရှစ်ပါးအရ Sexual misconduct လို့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ တားမြစ်မှုတွေ ပါရှိနေတယ်။ သမားရိုးကျ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ-စိတ်ပညာ သီအိုရီက “ကလေးငယ် ၃-၅ နှစ်သား အရွယ်မှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် မိဘကို Incestuous desires ဒီသဘောဆောင်တဲ့ တွယ်တာမှု ဖြစ်တယ်” လို့ ဆိုတယ်။ ဂရိ Oedipus Rex ကို အစွဲပြုပြီး သားကနေ မိခင်အပေါ် စိတ်ညွှတ်တာကို Oedipus complex လို့ ခေါ်တယ်။ မေးတဲ့သူရဲ့ Masturbation အဆင့်ဟာ “မနောကံ” တခုထဲ ရှိသေးတယ်။ ပြင်လို့ရတယ်။ လူ အတော်များများမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမှား တခုမဟုတ်တခု ရှိခဲ့တတ်ကြတယ်။ တချို့က စိတ်အထူးကု ဆရာဝန် ဆိုတာ ကြားတောင် မကြားဘူးပေမဲ့၊ ပျောက်ကင်း သွားကြတယ်။ ဆုံးမစကားတခု ရှိတယ်။ “မစားကောင်းသော အသီး”။ ဆွေမျိုး ရင်းခြာ၊ သူများ သားမယား၊ အရွယ် မရောက်သူတွေကို မကျူးလွန်အပ်သူလို့ လူတိုင်းမှာ “အသိ” ရှိကြတာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘာလို့ ဖြစ်ကြသလဲ။ “စိတ်” ဟာ Special senses လို့ခေါ်တဲ့ အကြား၊ အမြင်၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အထိအတွေ့ ဆိုတဲ့ အာရုံငါးပါးမှာ နစ်မျော-မွေ့လျော်-ပျော်ပါးလေ့ရှိတယ်။ အာရုံငါးပါးအပြင် လူလူချင်း မတူကြတာက မျိုးဗီဇ၊ ဟော်မုန်း-ဆေးဝါး အပြင် ကာလံဒေသံ ဆိုတာလဲ အရေးပါသေးတယ်။ ဇာတ်တော် တခုထဲမယ် ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် နှစ်ဦးထဲ အတူရှိနေရင် ဖေါက်ပြန်စိတ် ဆိုတာ ဆွေမျိုး တော်သော-မတော်သော ဖြစ်တတ်တာကို မိခင်ကနေ သားကို ပညာပေး ဆုံးမဘူးတယ်။ “အဆုံးအမ” တည်လို့ ဘာမှ အမှားအယွင်း မဖြစ်ဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စွဲလမ်း-နှစ်လိုမှု၊ ကာယကံမြောက်မှု ဆိုတာတွေက အဲလို အကြောင်းတွေကနေ ဖြစ်တာဘဲ။ လူနဲ့ တိရစ္ဆာန် ကွဲပြားတာက ဒီနေရာမှာပါ။ လူမှာ “လူ့စည်း” ဆိုတာ ရှိကြရတယ်။ ဘာသာရေး-စည်း၊ လူမှုရေး-စည်း ဆိုတဲ့ အခြေခံနဲ့ အကျယ်ပြန့်ဆုံး စည်းတွေသာမက အသင်းအပင်း-စည်းကမ်း၊ ကျောင်း-စည်းကမ်း စတာတွေလဲ ရှိသေးတယ်။ သစ္စာရည်သောက်၊ သွေးဖေါက်သစ္စာဆို လုပ်တတ်ကြသလို တချို့ကြ သံမဏိ-စည်းကမ်း လို့တောင် ခေါ်တဲ့ ဖေါက်ရင် ပြစ်ဒဏ် ကြီးကြီးမာမားနဲ့ တားတာမျိုးလဲ ရှိတယ်။ LTTE တွေဟာ လည်ပင်းမှာ Cyanide tube ဆွဲကြရတယ်။ စည်းမတူ၊ နည်းမတူ၊ လူလူချင်း မတူကြပါ။ တိုက်နယ် ဆရာဝန်ဘဝတုံးက ရွာတရွာမှာ ဖအေ-သမီး ပေါင်းသင်းတာကို တွေ့ခဲ့ရဘူးတယ် နယ်သူ-နယ်သားတွေက Taboo ကျိန်စာသင့်တယ်လို့ မှတ်ယူကြတယ်။ မိုးအုံ့ရင် ခွေးစားခွက်နဲ့ ထမင်းစားစေတယ်။ မိုးကြိုးပြစ်မှာ စိုးလို့တဲ့။ Liberal သမားတွေဟာ အများစုက အစဉ်အလာအရ လက်ခံတာတွေ အပါအဝင် ပယ်ချင်တာ မှန်သမျှ ပယ်ချင်ကြတယ်။ သူတို့နဲ့ မတူရင် ခေတ်ဟောင်း နောက်မြီးဆွဲလို့ သမုတ်ကြတယ်။ ဒီ ကျန်းမာရေး ပြဿနာမှာ သေခြာတာတခုက Taboo ကြောင့် Incest နည်းစေပါတယ်။ Dr. တင့်ဆွေ Posted by
Nude @ ည မင်း သား က လေး
ဒေဝီ ရဲ့ အလှဓါတ်ပုံများ June52012 | visitor: 106...
ခြူးသက်နွယ် ရဲ့ စွဲမက်ဖွယ် ဓါတ်ပုံများ June62012...
ပုရိသကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်မယ့် ရွှေစင်ရဲ့ ညှို့ဓာတ်ပြင်...
Myanmar Model Nay Pan Kyi
KIRARI 23 :: Hina Maeda
S Model 60 :: Megumi Haruka
Unknow Myanmar Model @mmbeer
stepfather & his daughter
Questions byasingle woman အပျိုကြီးရဲ့ မေးခွန်းမ...
ကဗျာမမှီ စာမမှီ အလှပန်းချီတွေရဲ့ ဒိုင်ယာရီများ
ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
စပွန်ဆာ အန်ကယ်ကြီး အပိုင်း ၂
မြန်မာတဲ့ @ တို့ တ ...
အလန်းဇယားတွေထဲက ရင်ခုန်သံပြခန်း ...
မြန်မာမော်ဒယ် - မေသူအောင်
asian anal (10)
asian anal (8)
Pretty Model Saung Yonn San in Bangkok City
၀၉ ၅၁၉ ၂၁၈၇ဖုန်းနံပတ်
Japanese Mom and Her Stepson Fuck (Uncensored)
Celebrity Couple : Ah Boy and San Ya...
Myanmar Actor Myint Myat and His Gir...
Gender Differences အတွဲများ၏ အစီရင်ခ...
Blood group matching before marriage...
Female Masturbation (2) အမျိုးသမီးမျ...
M ဆိုင်းလု @MMBEER SHOP
Vaginal Cysts, Polyps, Warts ဗဂျိုင်းနားမှာ အပိုအ...
Labia မ-အင်္ဂါ နှုတ်ခမ်းသား လှဘို့လိုသလ...
vzo chat (2)
မြန်မာ မော်ဒယ် @nyaminth...
Physiology of Erection ကျားအင်္ဂါ သန်မ...
Anejaculation သုက်မထွက်ခြင်း သူငယ်ချင်းတေ...
Popular Singer Aung La and His Girlf...
Semen Leakage (2) သုက်ရည်ထွက်ကျခြင်း...
Semen Leakage (1) သုက်ရည်ထွက်ကျခြင်း (၁) Sat, ...
Sperm comes from သုက်ရည် ဘယ်ကလာသလဲ Sun, Jun ...
Colourful Model Girls in Myanmar ...
Photos: Charity Variety Concert at National Theat...
Husband and Wife လင်မယား ဆက်ဆံရေး မေ...
မြဘုန်းဆင့် (အခု ဘန်ကောက်မှာပါ မြန်မာမလေးပါ)
IUD for Birth Control ကိုယ်ဝန်တား သာ...
ထွားလိုက်ပုံများ @ zawzaw11 (ည မင်း ...
အောင်မြင်မှုဆိုတာ ပရိသတ်အားပေးမှုအပေါ် မူတည်ပါတယ် သဲေ...
Men’s Medicine (၂) ယောက်ျားတွေ မေးတဲ...
Men’s Medicine (1) ယောက်ျားတွေ မေးတဲ...
G-spot တကြော့ပြန်လာပြီ G-spot ...
Model Thandar Hlaing in Sleeveless B...
ယနေ့ ယခိုင်ပြည်နယ်သတင်း ဓါတ်ပုံ ၁၀၀
Size does matter ယောက်ျား-အင်္ဂါ အတိုင...
Contraceptives for women with STI/HI...
Teenage Model Sue Sha Naing's Swimwe...
New Face Model Khin Chan Myae Soe in...
Photos: Kanebo Cosmetics Promotion F...
ဘူလေးလဲ @ ဒေါက်တာ ဘီလူးကြီး
နေပြည်တော်ကဆိုပဲ ကဲ နေပြည်တော် ကြက်ကလေး အပွ...
indonesia cam video
မြန်မာကားသစ် မေးလ်ထဲရောက်လာတဲ့ မြန်မ...
Model & Actor May Kabyar in Lonely F...
မလေးရှားမှ မြန်မာများသတိထားပြီး စည်း...
Photos: Khun Sint Nay Chi's First Solo Album Prom...
Couple Fashion @ Bridal Fair 2012 in...
@nyaminthar vzo chat ဘူလေးတွေလည်းးးး ညညအခါ
Cute Model Thun Sett's Hot Fashion P...
Myanmar Beautiful Models @ Car Expo ...
ဘူတွေလဲ၊ဘယ်နေရာလဲ @ အချစ်တက္ကသိုလ်
မြန်မာမ လေလား @ အ ချစ် တ က္က သိုလ...
စာအုပ်စင် (အတွေးပင်လယ်ပြာဖိုရမ်) ဒီစာအုပ်စဉ်လေး...
ဂလုကြဗျာ မေးလ်ထဲရောက်လာတာပါ။ ရွှေမလေးပ...
happy birthday luyankarr